विभोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लि. लाई अन्तरास्ट्रिय अवार्ड - Asian Samachar
विभोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लि. लाई अन्तरास्ट्रिय अवार्ड
Asian Samachar मङ्लबार, पुस १९, २०७३ (11 months ago) अर्थ/बाणिज्य
विभोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लि. ले अन्तरास्ट्रिय ‘बेस्ट इन्टरप्राइजेज अवार्ड’प्राप्त गरेको छ । बैंकलाई हालसालै ‘सम्मीट अफ लिडर–२०१६’, सोक्रेटस अवार्ड सेरोमोनी अक्सफोर्ड , लन्डनमा अन्तर्राष्ट्रिय ‘बेस्ट इन्टरप्राइजेज अवार्ड’बाट सम्मानित गरिएको छ । उक्त पुरस्कार ‘युरोप बिजनेस एसेम्ब्ली’ (EBA) द्वारा प्रदान गरिएको हो । साथै EBA ले उक्त डेभलपमेन्ट बैंक लि. का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री झलक प्रसाद खनाललाई ‘मेनेजर अफ दि इयर’ घोषणा समेत गरेको छ ।
विभोर सोसाइटीलाई बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा कुशल व्यवस्थापनबाट राष्ट्रका पहाडदेखि तराइ र पुर्वदेखि पश्चिमसम्म शाखा संजाल मार्फत सर्वसाधारण जनतासम्म वित्तीय पहुँच पुर्याउन विशेष योगदान गरेको , जस्तोसुकै वित्तीय अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई समेत सजिलै व्यवस्थापन गरि आफ्ना ग्राहकहरुको हितमा कार्य गर्न सफल रहेको , साथै सफल बजार रणनीतिद्वारा आफुलाई बलियो रुपमा उभ्याउन सफल भइ आजको ठुलो डेभलपमेन्ट बैंकको रुपमा स्थापित हुन सफल रहेको अनि उच्च योग्यताका कर्मचारीहरुको समूह रहि व्यवस्थापन गर्न सफल भएको आदि कारणहरुलाई आधार बनाइ उत्कृष्ट घोषित गरिएको हो ।
युरोप बिजनेस एसेम्ब्ली’ (EBA) ६० भन्दा बढी देसहरु सदस्य र साझेदार रहेको एक युरोपियन संस्था हो । उक्त पुरुस्कार ग्रहण गर्न लन्डनको अक्सफोर्डमा बैंकका अध्यक्ष सुशील राज पराजुली र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलक प्रसाद खनालको उपस्थिति रहेको थियो । साथै प्रमुख कार्यकारी खनालले उक्त EBA सभामा बैंकको सम्बन्धमा “सफलताको कथा ” प्रस्तुत गरेका थिए ।
हाल सम्मका बैंकहरुमा देशकै ठूलो चुक्ता पुँजी तथा ४२ वटा शाखा तथा १ एक्स्टेन्सन काउन्टर सहित बृहत् सन्जाल भएको यस बैंकको चुक्ता पुजि रु १.८२ अर्व रहेको छ ।